रमेशकुमार पौडेल - | Nagarik News - Nepal Republic Media
३ नम्बर प्रदेशमा सभामुखको निर्वाचन माघ २७ गते
तीन नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभा बैठकले सभामुखको निर्वाचन मिति तय गरेको छ। बैठकले माघ २७ को लागि सभामुखको निर्वाचनको मिति तोकेको हो। बैठक २७ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ।
रमेशकुमार पौडेल १८ माघ २०७४ बिहीबार १ मिनेट पाठ
दियालो बंगला क्षेत्रको जग्गा भाडामा
नेपाल ट्रस्टले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भरतपुरको दियालो बंगला क्षेत्रको जग्गा भाडामा लगाएको लामो समय भएपनि विवादका कारण कुनै संरचना बन्न सकेको छैन । ट्रस्टले दरबार क्षेत्रभन्दा अलग रहेको ६ बिघा जग्गा लिजमा दिन टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ०७३ को वैशाखमा टेन्डर सूचना निस्केपछि बढी रकम कबोल गर्ने जंगल रिसोर्ट प्रालिले जग्गा पाएको थियो ।
रमेशकुमार पौडेल १८ माघ २०७४ बिहीबार ७ मिनेट पाठ
सशस्त्र संघर्षका समयमा माडी बाँदरमुढे खोलामा माओवादीले थापेको विद्युतीय धरापमा परेर निधन भएका ३८ जनालाई सरकारले गत साता सहिद घोषणा गरेको छ । चितवनबाट २०७० सालमा चुनाव जितेर अहिलेको कामचलाउ सरकारका वनमन्त्री विक्रम पाण्डेको पहलमा सहिद घोषणा भएको भनिएको छ।
रमेशकुमार पौडेल १७ माघ २०७४ बुधबार ३ मिनेट पाठ
डिपिआरको काम सुरु
शक्तिखोरमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गर्ने काम सुरु भएको छ । इको कोड नेपाल प्रालिले उक्त काम सुरु गरेको हो । ६ महिनाभित्र डिपिआर निर्माण र वातावरणीय प्रभाव अर्थात इआइएको अध्ययन पूरा हुने प्रालिका निर्देशक इन्जिनियर कुमार धमलाले जानकारी दिए ।
रमेशकुमार पौडेल १७ माघ २०७४ बुधबार ६ मिनेट पाठ
मनबहादुर चेपाङ चितवनको पहाडी गाउँ सिद्धि रन्तेसस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन् । उनी १० वर्षका हुँदा कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तीन कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनको पढाइ छुट्यो । कक्षा ४ मा पढ्दा किताब किन्नुपथ्र्याे । ‘किताब किन्ने पैसा नहुँदा पढ्न पाइनँ’, मनबहादुरले भने।
रमेशकुमार पौडेल १६ माघ २०७४ मंगलबार ९ मिनेट पाठ
संरक्षण सहिदको ख्याल भएन
माओवादी शसस्त्र संघर्षका समयमा माडी बाँदरमुढे खोलामा माओवादीले थापेको विद्युतीय धरापमा परेर निधन भएका ३८ जनालाई सरकारले बिहिबार सहिद घोषणा गरेको छ। सो सहिद घोषणा चितवनबाट ७० सालमा चुनाव जितेर अहिलेको काम चलाउ सरकारमा वन मन्त्री रहेका विक्रम पाण्डेको पहलमा भएको भनिदै आएको छ।
रमेशकुमार पौडेल १२ माघ २०७४ शुक्रबार ४ मिनेट पाठ
क्यान्सर उपचारका लागि अस्पताल आउनेमा कृषि पेसामा आबद्ध बताउने अधिक छन् । राष्ट्रिय क्यान्सर रजिष्ट्रीको १० वर्षे रिपोर्टमा यो विवरण उल्लेख छ । यो विवरणकै आधारमा क्यान्सर र कृषिबीचको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको छ ।
रमेशकुमार पौडेल १२ माघ २०७४ शुक्रबार ८ मिनेट पाठ
प्रदूषण र मानव चापले घटे पानी चरा
जाडो छल्न पानीमा आश्रित चरा साइबेरियाजस्ता चिसा ठाउँबाट हिउँदको समयमा नेपालका नदी, खोला, पोखरी, तालतलैया र सिमसार क्षेत्रमा आउँछन् । बासस्थान राम्रो भएमा र पानीमा माछा, कीरा फट्यांग्रा र लेउ तथा झ्याउजस्ता आहारा प्रशस्त भएमा उनीहरु हिमालय शृंखलासमेत पार गरेर नेपाल आउने हुन्।
रमेशकुमार पौडेल ९ माघ २०७४ मंगलबार ६ मिनेट पाठ
एचआईभी संक्रमितका लागि सरकारले निःशुल्क उपचार सेवा दिँदै आएको छ । संक्रमितले भने आफूहरुले सेवन गर्ने औषधिको साइड इफेक्ट देखिन थालेको बताएका छन् । संक्रमितको सरोकारका विषयमा दुई दिनसम्म भरतपुरमा सञ्चालित भेलाका सहभागीले गुणस्तरीय उपचार सेवाको माग गरेका छन् । आइतबार सकिएको भेलामा सातै प्रदेशका सयजना संक्रमित सहभागी थिए।
रमेशकुमार पौडेल ८ माघ २०७४ सोमबार ७ मिनेट पाठ
निजी क्षेत्रसँग साझेदारी नगरे द्रुत विकास असम्भव
नेपालले आउँने वर्षहरुमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठ उक्त लक्ष्य हासिल गर्न २४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तर यत्रो रकम सरकारसँग छैन,’ सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीलाई चाहिने यो रकममा ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ।’
रमेशकुमार पौडेल ७ माघ २०७४ आइतबार ९ मिनेट पाठ
निर्माणमा खेलाँची, यात्रुलार्इ सास्ती
गत पुस १८ बाट नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा राति १० बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म गाडी चलाउन बन्द गरियो । राजधानीको जीवनरेखा अर्थात् लाइफलाइन मानिने यो सडकखण्ड निर्माण चाँडै सक्न राति कामलाई तीव्रता दिने भन्दै गाडी चलाउन रोक लगाइएको हो । तर यस अवधिमा काममा कुनै प्रगति हुन नसकेको पाइएको छ ।
रमेशकुमार पौडेल ७ माघ २०७४ आइतबार १२ मिनेट पाठ
रातीमा गाडी बन्द गरेर काम गर्दा कुनै प्रगति हुन नसकेको भन्दै नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड माघ १३ गते शनिबारदेखि दिउँसोमा बन्द हुने भएको छ।
रमेशकुमार पौडेल ५ माघ २०७४ शुक्रबार २ मिनेट पाठ
चिच्चर थारु समुदायको भान्सामा पाक्ने चामलको विशेष परिकार हो । चिच्चर अनदी धानको चामलको मात्रै बन्छ । चिच्चरसँग खाने तरकारी खेत, घोल र पोखरीमा पनि भेटिने घोगी हो । चितवन खैरहनीमा भइरहेको खिचरा महोत्सव जानेले यी दुई परिकार पेटभरी खान पाउँछ । महोत्सव परिसरमा खाने चिच्चर र घोगी मात्रै छैन फोटो र सेल्फी खिच्न पनि पाइन्छ ।
रमेशकुमार पौडेल ५ माघ २०७४ शुक्रबार ३ मिनेट पाठ
तरुलको स्वाद लिँदै कला चिन्तन
बिक्री हुन्छ धेरै जसो चित्रकला प्रदर्शनी काठमाडौंमै हुने गर्छन् र धेरैजसो कलाकारले पनि काठमाडौंलाई नै कर्मथलो बनाएको देखिन्छ । तर काठमाडौं बाहिर पनि प्रशस्तै कलाकार छन् र हालका दिनमा मोफसलमा पनि चित्रकला सम्बन्धि कार्यक्रमहरू हुन थालेका छन् भने प्रदर्शनी आयोजना गर्नु पनि अब गाह्रो कुरा रहेन । त्यस्ता प्रदर्शनीमा पनि कालकारको सिर्जना राम्रै मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।
रमेशकुमार पौडेल ४ माघ २०७४ बिहीबार ६ मिनेट पाठ
नेपथ्यको कन्सर्टमा डा. केसीलाई नमन
सुपरिचित सांगीतिक ब्यान्ड नेपथ्यसँग दर्शक नचाउनका लागि उत्कृष्ट गीतको अभाव छैन । तर सोमबार साँझ नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा हज्जारौं दर्शक माझ नेपथ्यले आफ्ना गीत मात्रै गाएन । राल्फाली समूहकको चर्चित प्रगतिशील गीत ‘गाउँ गाउँबाट उठ, वस्ती वस्तीबाट उठ’ समेत सुनायो। नेपथ्यले सो गीत गाउँदै डा. गोविन्द केसीको अभियानप्रति एक्येवद्धता जनायो ।
रमेशकुमार पौडेल ३ माघ २०७४ बुधबार ४ मिनेट पाठ
रमेशकुमार पौडेलका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्